Mu dị iche - Harley Street Clinic London Nlere Ule Hosplọ ọgwụ Ahụike
Dị ka Septemba 2021 fọrọ nke nta 70% of UCL patients who tested positive for COVID-19 had the Mu variant.
N'obodo ndị nwere ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị ala, ọkachasị ime obodo nwere oke nlekọta nlekọta, the Mu variant could be even more damaging. A na-ahụ nke a gburugburu ụwa na mba ndị dara ogbenye ebe enweghị ọgwụ mgbochi COVID-19. Ndị ọkachamara ahụike kwuru na enwere ike inwe mmetụta ahụ ọtụtụ iri afọ na -abịa.
“Okwu mkpachapụ anya,”Ebe ndị mmadụ na-agba ọgwụ mgbochi ọ bụla na-enweta COVID-19, ka na -ewere na ọ dị ụkọ, even with Mu, dị ka UCL si kwuo, mana ọ bụrụ na onye nwere ọgwụ mgbochi oria, ha nwere ike ibunye nje. (UCL na -aga n'ihu na -enyocha data ma ndị mmadụ nwere nnukwu ọrịa na -enweghị mgbaàmà nwere ike gbasaa nje ahụ.)
The most important thing you can do to protect yourself from Mu Variant is to get fully vaccinated, ndị dọkịta kwuru. N'ebe a, nke ahụ pụtara ma ọ bụrụ na ị nweta ọgwụ mgbochi abụọ dịka Pfizer ma ọ bụ Moderna, ọmụmaatụ, ị ga-enwerịrị gbaa abụọ wee chere oge izu abụọ a tụrụ aro ka gbaa ndị ahụ wee nwee mmetụta zuru oke.